Archive du 20190625
Fanafihana atoandro teny 67ha Olona niara-nihinana lasopy taminy no namono ilay lehilahy
“Nandalo izahay no nitsipatsipaka niala aina ilay mpitondra moto, rehefa avy notifirin’ireo jiolahy”, hoy ny mpandalo nanatri-maso. Re avy eo fa mpikirakira ara-barotra (agent commercial) an’ny orinasa JB ity lehilahy mbola tanora izay maty voatifitra ity.
Tale jeneraly vaovaon’ny BIANCO Mety jeneraly na minisitry ny fitsarana teo aloha
Tapitra ny alahady 23 jona lasa teo ny fe-potoam-piasan’ny Tale jeneralin’ny Bianco Atoa Jean Louis Andriamifidy. Andrasana kosa ny fanendren’ny filoham-pirenena izay ho solony taorian’ny sivana nataon’ny CSI (Comité pour le Sauvegarde de l’Intégrité) izay naharay antontan-taratasina kandida miisa 64 nanaovana sivana ka nahazoana anarana 10, ary 3 no voatazona farany hisafidianan’ny filoha.
Analakely sy Mahamasina Hentitra dia hentitra ny fitandroana ny filaminana
Ao anaty fanomanana ny fankalazana ny faha-59 taona niverenan`ny fahaleovantena isika amin`izao.
Filàna dera amin’i Paul Kagame Sarontsaronana ny tena zava-misy eto
Higadona eto Antananarivo anio talata 25 jona ny Filohan’i Rwanda Paul Kagame, izay vahiny manokana sy manan-kaja amin’ny fankalazana ny faha-59 taona nahazoantsika ny fahaleovantena.
Barea miatrika CAN Nivavaka aho dia maty ny baolina, hoy ny filoha
Rehefa niresaka baolina kitra isika, dia gisitra foana ny Malagasy. Tsy manana eritreritra mihitsy isika hoe manana ny toerana maha izy azy ny Malagasy.
Body Perfect 2019 Nizarana 7,9 tapitrisa ariary ireo mendrika
Notontosaina tao amin’ny kianja mitafon’Akorondrano tamin’ny alin’ny sabotsy 22 jona 2019 lasa teo ny fifaninanana Body Perfect 2019 nokarakarain’ny FMB « Federation Malgache de Bodybuilding ».
Basket FIBA AFRIQUE Fantatra ireo mpikambana hiara-kiasa amin’i Anibal Manave
Notontosaina tany Bamako Mali tamin’ny sabotsy 22 sy alahady 23 jona 2019 teo ny kongresy faha-17 an’ny FIBA AFRIQUE “Association des Fédérations Africaines de Basket-ball”
Can Egypte 2019 Miditra an-tsehatra farany anio ny ao amin’ny vondrona F
Ry zareo ao amin’ny vondrona F anio talata 25 jona, andro faha-5 eo amin’ny fanatanterahana ny CAN 2019 tontosaina any Egypte no hiditra an-tsehatra farany
Nicolas Dupuis Hanova stratejia amin’ny fihaonan’ny Barea manaraka
Hiova hafa mihitsy ny firafitry ny Barean’i Madagasikara amin’ny fihaonana amin’i Burundi ny 27 jona izao ao anatin’ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika amin’ny baolina kitra atsy Ejipta,
Masoandro tsy miposaka
Rahampitso no hankalazaina ny tsingerintaona faha-59 niverenan’ny fahaleovantenan’i Madagasikara, 26 jona voalohany amin’ny maha filohan’ny Repoblika voafidim-bahoaka an’i Andry Rajoelina ihany koa io.
Lalan’Ambatonakanga vita Manala fahasahiranana ny maro
Niverina tamin’ny laoniny ny sabotsy 22 jona lasa teo ny fifamoivoizana teny Ambatonakanga midina an’Ambohijatovo.Vita tara ilay lalana « Pavé »
Ambodin’Isotry Vehivavy iray nitondra entana nobatain’ny mpanendaka
Vehivavy iray manodidina ny 40 taona, nitondra poketra sy entana maromaro teny an-tanany omaly maraina no nobataina mpanendaka telo mirahalahy tetsy Ambodin’Isotry.
Akoho amam-borona Mbola vitsy mpaka na dia nihena aza ny vidiny
Anisan’ny fety tena manan-danja ho an’ny Malagasy ny 26 jona izay hankalazaintsika afaka rahampitso.
Fokontany Manarintsoa sy Andavamamba Ankizy miisa 300 nizarana arendrina sy vatomamy
Ho fankalazana ny fetim-pirenena 26 jona sy ho fanamarihana ny iray volan’ny ankizy dia nizarana arendrina sy vatomamy avokoa omaly ireo ankizy miisa 300 ao anatin’ny fokontany Manarintsoa sy Andavamamba.
Ravao Mpanotra etsy Sabotsy Namehana Nijery ny zaza kamboty sy sahirana indray
Mitohy ny asa sosialy fanaon-dRtoa Ravao mpanotra etsy Sabotsy Namehana, efa nandritra ny 40 taona izao, rehefa ankatoky ny andro fety tahaka izao.
Ady amin’ny tsy fandriampahalemana Hiasa maharitra ve ireo « caméra de surveillance » ?
Resabe amin’ny tambajotran-tserasera sy ny haino aman-jery ny fametrahan’ny fitondram-panjakana « caméra de surveillance » amin’ireo toerana lalovan’ny manampahefana sy ilay filoham-pirenena teratany vahiny ho avy hankalaza ny fetim-pirenena rahampitso.
Fahaverezan’i Finoana Birao amoron-dranomasina no nitondrana azy
Araka ny fampitam-baovaon’ireo mpiara-mivavaka amin’i Finoana, misy birao efa fandraisan’olona mihitsy ireo mpanondrana olona izay naka an-keriny ity tovolahy 17 taona ity, araka ny tafa nifanaovan’izy ireo.
Lozam-pifamoivoizana RN7 Ambalavao Atsimondrano Maty tsy tra-drano ilay mpamily fiarabe
Nitrangana loza nahatsiravina teo Mananasy, Kaominina Ambanivohitra Ambalavao, distrika Atsimondrano, afak’omaly alahady tokony ho tamin’ny 9ora maraina.